Soda mandritra ny fitondrana vohoka
Ny soda mofomamy dia hita ao amin'ny trano tsirairay. Feno an-kafetsena tanteraka izany: halaina ny lovia avy any Shina, ary hodiovina ny batisan'ny takelaka, ary hisy rivotra bebe kokoa hanaovana sy hahasitrana aretina sasany! Raha vao jerena aloha dia toa tsy misy dikany fotsiny izany fa soda tsy mampidi-doza mandritra ny fitondrana vohoka? Hanimba ny vatan'ny reny sy ny zanany ho avy ve izy io? Andao hiresaka momba ny fotoana ahafahanao, ary rehefa tsy afaka mandany soda ianao rehefa eo an-toerana.
Soda amin'ny sodina
Ny fiterahana mandritra ny fitondrana vohoka dia tranga iray mahazatra, mitranga matetika amin'ny reny hoavy. Fantatsika rehetra fa ny fampiasana soda dia afaka manala ny fo ratsy ao anatin'ny fotoana fohy indrindra, fa tsy manimba ny soda amin'ny fatotra ve mandritra ny fitondrana vohoka? Indrisy, vehivavy iray bevohoka no mifanohitra amin'ny fitsaboana amin'ny soda. Tadidinay daholo ny lesona momba ny simia, fa ny soda dia bikarbonate bakteria, izany hoe ny sodium amin'ny ankamaroan'ny maro dia miteraka fifindrana, ary misy fiantraikany ratsy amin'ny moka ny tsinay. Noho izany, raha mbola sahiran-tsaina amin'ny fanontaniana ianao - afaka misotro soda mandritra ny fitondrana vohoka na tsia, - aleo miala eto, dia tsy afaka mitondra soda ao anatin'io vehivavy bevohoka io ny vehivavy bevohoka, ary avy amin'ny fiterahana dia betsaka ny fitsaboana ny vatanao.
Soda miaraka amin'ny tongotra
Saingy ny fitsaboana ny fanosihosena mandritra ny fitondrana vohoka dia tsy miteraka voka-dratsy. Mba hisorohana ny fiepoana manjavozavo, ny toetoetrany, mila mila manasa amin'ny soda mandritra ny fitondrana vohoka ianao, manaraka ity fomba manaraka ity: a teaspoon soda voavoatra amin'ny rano mangatsiaka mamy ary, raha ny marina, ampiasao izany ho an'ny tanjona voafaritra. Ny fitsaboana amin'ny soda mandritra ny fitondrana vohoka dia tsy voatery, na inona na inona tsy hanimba ny foetus.
Soda amin'ny fitsaboana
Ny vehivavy bevohoka dia tsy tokony ho marary mihitsy, ankoatra izany, raha maro ny fanafody dia mifanohitra amin'ny reny hoavy. Ary eto indray indray ny soda makirana tsotra dia tonga amin'ny famonjena. Ny hormona amin'ny soda mandritra ny fitondrana vohoka dia hanampy amin'ny fanasitranana ny laryngitis, pharyngitis, stomatitis ary olana hafa. Ny ilainao dia ny manadio iray teopy soda ao anaty vera misy rano mafana - efa vonona ny fanafody! Ny menaka miaraka amin'ny soda mandritra ny fitondrana vohoka dia miteraka fiantraikany, manampy amin'ny fanasitranana kohaka. Manana tsiranoka amin'ny trakta momba ny taovam-pisefoana izy ireo, ary tsy manisy ratsy ny vatany, ary mitondra vohoka amin'ny soda mandritra ny fitondrana vohoka.
Noho izany, raha oharina amin'ny fananana soda, dia azonao atao ny milaza zavatra iray: "matokia, fa jereo". Amin'ny vehivavy bevohoka, vehivavy iray dia mila manontany fotsiny, mba hahalalany hoe inona no azo ampiasaina amin'ny toe-javatra iray, ary iza no tsy mendrika izany. Mikarakara ny fahasalamanao!
Faharetan'ny fitondrana vohoka amin'ny ultrasound
Mianjera amin'ny fahantrana
Ny trondro miteraka
Ny pancreatine amin'ny bevohoka: mety ve sa tsia?
Ny fiterahana ao amin'ny HBV
Ny aretim-pivalanana amin'ny fahatontosana
Afaka manana firaisana ara-nofo ve ny vehivavy bevohoka?
Ny taom-pambolena voajanahary
Polypan'ny lakana fitsaboana - fitsaboana
Firy taona i Sylvester Stallone?
Miasa ho an'ny vehivavy any ivelany
Trichomonases amin'ny loto
Hypertrophy ny fo
Kiraro antitra mafana ho an'ny kiraro
Ahoana no nahalalan'i Marina Afrikantova lanja?
Progesterone - tsimokaretina amin'ny fahatarana
Fanadihadiana nandritra ny fitondrana vohoka
Lisa Minnelli dia nivadika 70 - filàna maotina ary hira maro
Ahoana no hanasana ny karipetra any an-trano?
Frame of the day: Mandeha akoho amin'ny tongony i Jennifer Garner
Rahoviana no tonga ny ronono aorian'ny fizarana an'i Kaisara?
Ny kitrokely dia mihodikodina
Cervicitis - fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny vahoaka
Tazo "Pink Elephant"
Mark Zuckerberg sy ny "antsasany" nandany fialantsasatra fohy tany Espaina
Ny Grottoes an'i Hercules